Ingxaki yesiko yile:
1. Ukufaka umatshini ongazange ugcinwe: isikhombisi sesitayile sesilayidi sibunjiwe kakuhle, isantya somatshini siyacotha, isiphumo somsebenzi asilungile, ubomi boomatshini abukho mgangathweni, izembe le-Z libambekile, impazamo yedigital inkulu, kwaye i-angle yokukhetha ayilunganga! Idrive ayinempazamo kwaye impazamo elandelayo inkulu kakhulu! Ukuphinda wenze umonakalo kwakhona, ukusilela koomatshini njengokugqabhuka kwesilayidi!
2. Ukufaka umatshini ngegrisi engalunganga: sebenzisa igrisi, ioyile, umatshini wokuthunga kunye nezinye igrisi. Ukubonakala kwebhotile kuphezulu kakhulu, nto leyo engeyonzuzo kumatshini. Ukuthunga umatshini i-viscosity incinci kakhulu, kwaye iyingozi kulowo ungaqondanga. Eyona ixhaphakileyo kukusetyenziswa kweoyile yeinjini, eya kuthi ivelise udaka kunye ne-adsorb emdaka.
3. Ukusetyenziswa kwexesha elide kweoyile yeinjini. Kuya kubakho ungqameko lwe-sludge ephuzi kumphezulu kaloliwe. Uya kufumanisa ukuba amathuba okufaka oomatshini aya esiba mfutshane kwaye amfutshane, kwaye imfuno iya ikhula ibe nkulu.
Isisombululo, sebenzisa ioyile ekhethekileyo yokuthambisa enetekhnoloji yegraphene
1. Dissolve oyile i-sludge ngamandla kwaye inyibilikise ngokukhawuleza i-sludge eveliswa zioli ezinjengebhotile yeoyile yemoto
2. Ukuthambisa ngokufanelekileyo ioyile yesikhokelo, isaladi, iintonga zesikre, umama wentambo, irack, shaft yegiya, iibheringi kunye nezinye izinto zomatshini okroliweyo
3. Ukhuseleko olungakumbi Unxibelelwano olukhethekileyo olucothayo olukhusela ngokuthe ngcembe lukhusela ukusebenza kwentsimbi kwaye lwandisa ubomi benkonzo 4. Ukhuselekile Ixabiso le-PH alithathi cala kwaye alinazinto ze-acid okanye ii-alkali, alilungelelanisi uloliwe wesikhokelo, kwaye alinabungozi emzimbeni womntu!
1. Ngomatshini omtsha osetyenzisiweyo okokuqala: kongeza ngqo ioyile ekhethekileyo yokuthambisa kumbiza yeoyile, ungagqithi kwisibini esithathwini somthamo weoli, ukunqanda uxinzelelo olukhulu kunye nokugcwala. Okanye sebenzisa isinki sokuthambisa okanye ibrashi yonke veki ukufaka ngokulinganayo kumacandelo esixhobo. Kanye ngeveki okanye isiqingatha senyanga.
2. Kwizixhobo ezindala, kucetyiswa ukuba ucoce iinxalenye ngaphambi kokusetyenziswa!